Izidingo Zama-Passport & Visa Abavakashi base-Antigua naseBarbuda
Kubavakashi base-Antigua naseBarbuda izidingo zokungena ezilandelayo ziyasebenza:
Iningi lezakhamizi zase-European Union (bheka uhlu olungezansi) ayidingi visa yokungena e-Antigua naseBarbuda eholidini noma ebhizinisini. Abantu abavakashela bavunyelwe ukuhlala uma nje ibhizinisi labo lithatha, uma nje:
a) lokhu akusekho ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha
b) banepasipoti enobuncane bezinyanga eziyisithupha ngokusemthethweni kusukela ngosuku lokuhamba kwabo
c) banetikiti lokuya phambili noma lokubuya
d) banobufakazi bendawo yokuhlala
e) bangaveza ubufakazi bamandla abo okuzigcina e-Antigua naseBarbuda
IZIMFUNO ZE-VISA / ENTRY ZOKUFUNA I-ANTIGUA NEBARBUDA
Ikhithi lesicelo se-visa lingalandwa ngokuchofoza lapha (PDF - 395Kb).
Kuvulwa i-Times ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-9.30:5.00 kuya ku-XNUMXpm. Ukuqokwa akudingekile. Isikhathi sokulungiswa kwezicelo ze-visa cishe Izinsuku eziyi-5 zomsebenzi.
Abenzi bezicelo bazokwaziswa ngosuku lokuqoqwa kanye nesicelo sabo futhi konke amadokhumenti axhasayo atholakele futhi asetshenzwa. Uyacelwa ukuthi uqaphele, ukubambezeleka kokusebenza kungenzeka. Izikhathi zokucubungula ezicashunwe ziyalingana futhi azinakuqinisekiswa. Ngeke kwenzeke ukuthi kusheshiswe icala ngoba umenzi wesicelo engavumanga isikhathi esanele sokuthi isicelo sidingidwe.
Abantu abadinga i-visa ye Antigua and Barbuda:
(Sicela ubhale ngezansi noma uqinisekise ngeKhomishini Ephakeme)
Ukufinyelela kwamahhala kweVisa okungaxutshwe nabanikazi bePasipoti, abaPhakathi kanye / noma abaPhathi abajwayelekile base-Antigua naseBarbuda
Andorra Estonia Liechtenstein ISamoa *
I-Argentina ** Fiji Lithuania San Marino
I-Armenia * Finland Luxembourg I-Seychelles *
Austria France IMacao * Singapore
I-Bangladesh * Georgia Madagascar Slovenia
Barbados Germany Malawi I-Solomon Islands *
Belgium Greece Malaysia Iningizimu Afrika
IBolivia * Grenada Malta Suriname
Bosnia Guatemala I-Mauritania * Swaziland
Botswana I-Guinea-Bissau * Mauritius Sweden
Burundi Honduras Monaco I-Timor-Leste *
ECambodia i-Hong Kong I-Mozambique * Togo
China India Nicaragua igalikuni
Colombia I-Iran ++ Norway Uganda
I-Comoros * Ireland I-Palau * Ukraine
Costa Rica Isle of Man IPanama * I-United Arab Emirates**
Croatia Italy Peru i-United Kingdom
Cuba Jamaica Philippines I-Uzbekistan (esebenzayo 1 Jan., 2020)
Cyprus IJordani * Poland Vanuatu
I-Czech Republic I-Kiribati * Portugal Vatican City
Denmark I-Korea (North) Qatar Venezuela
I-Djbouti * I-Korea (South) Reunion Zambia
i-Dominican Republic I-Laos * Russia
IGibhithe * ILebanoni * Saint Lucia
Izindawo ZaseBrithani Zakwamanye Amazwe
U-Akotiri noDhekelia Cayman Islands Montserrat Isle of Man
Bermuda Guernsey AmaTurkey namaCaicos
Iminyango YaseFrance Yaphesheya Nezindawo Ehlangene
French Guiana Martinique I-Saint Pierre neMiquelon
French Polynesia New Caledonia I-Wallis ne-Futuna
Amazwe WaseFrance Aseningizimu Nase-Antarctic ISt. Barth's
eBonaire St. Eustatius
Ezinye izindawo ezincike eYurophu:
UJan Mayen (Norway) I-Faroe Islands (Denmark)
Amanye Amazwe angadingi ama-visa okungena e-Antigua naseBarbuda:
IKazahkstan Mexico Peru
Korea INorway kanye neMakoloni INingizimu Korea
Monaco San Marino I-Tajikstan
Inhlangano yase Russia Switzerland Ukraine
i-United States of America Argentina
* I-Visa inikezwe lapho ifika ++ I-Visa inikezwe lapho ifika.
** I-Visa waiver for Passiplomatic and Official
Izakhamizi Zamazwe ezingaveli kuhlu olungenhla, zidinga i-visa.
Sicela wazi ukuthi izakhamizi zamazwe alandelayo weCommonwealth manje zidinga i-visa yokungena e-Antigua naseBarbuda:
I-Bangladesh, Cameroon, Gambia, Ghana, India, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone kanye neSri Lanka.
Izivakashi zasemkhunjini ohamba ngezikebhe obevame ukudinga i-visa bekungadingi elilodwa uma nje befika e-Antigua naseBarbuda ekuseni bese behamba kusihlwa esifanayo.
'Abagibeli be-Intransit ohamba phakathi kosuku olufanayo, ovame ukudinga i-visa, akadingi visa yokungena e-Antigua naseBarbuda, inqobo nje uma enobufakazi bohambo lwawo oluqhubekayo, futhi akaphumi 'endaweni elawulwayo' yesikhumulo sezindiza.
Kudingeka amadokhumenti lapho ufaka isicelo se-visa:
Ifomu lesicelo eligcwalisiwe.
Ipasipoti evumelekile noma idokhumenti lokuhamba elinemvume yokuhamba evumelekile noma yokungena kabusha yanoma iliphi izwe ongatholwa ngalo ithikithi, njenge-United Kingdom (sicela uqaphele, ipasipoti kufanele isebenze impilo okungenani yezinyanga eziyi-6 kusukela ngosuku lokufika e-Antigua naseBarbuda, futhi kumele babe nekhasi elilodwa elingenalutho ngokuphelele lokukhishwa kwe-visa.)
Isithombe sepasipoti yemibala yakamuva (45mm x 35mm).
Imali ye-Visa: Ukufaka okukodwa £ 30.00 Ukufaka okuningi £ 40.00
Imali eqondile liyacelwa uma lingeniswa mathupha ukuze kunqandwe ukubambezeleka.
I-oda leposi lenziwe likhokhwe ku Antigua and Barbuda Ikhomishini Ephakeme (uma ihanjiswa ngaphakathi e-United Kingdom).
ISterling International Money Order (uma isicelo sithunyelwa sivela ngaphandle kwe-United Kingdom) Ama-oda wemali kufanele akhishwe ngamakhilogremu. Ama-oda wemali nganoma iyiphi enye imali ayokwenza hhayi wamukelwe.
IMISEBENZI YABO BONKE AKUFUNI
Ubufakazi bokuhamba okuhlongozwayo bokungena nokuphuma e-Antigua naseBarbuda ie ithikithi noma isiqinisekiso sokubhuka kwakho kumenzeli wokuvakasha. Ama-visa amaningi wokungena anikezwa kuphela abafakizicelo abakhiqiza ubufakazi bokufakiwe okuningi phakathi Antigua and Barbuda.
Ubufakazi bendawo yokuhlala ubude bendawo ohlala kuyo noma incwadi yesimemo evela kumvakashi wakho. Okwababafundi, ngicela unikeze incwadi yokwamukela evela esikoleni sakho, nemininingwane yokuthi uzobe uhlala kuphi ngaphambi kokuqala kwezifundo zakho. Okomuntu ohamba ngebhizinisi, sicela unikeze incwadi evela kumqashi yakho ichaza inhloso yohambo lwakho.
Ngomusa faka U- £ 7.00 wokubuyisa imali yokuposa ebhalisiwe ngaphakathi Europe.
Ubufakazi bezimali zokuxhasa uhambo, okusho ukuthi izitatimende zasebhange ezinyangeni ezimbili ezedlule.
Kudingeka irekhodi lamaphoyisa uma licelwa yihhovisi elikhipha i-visa.
Sicela uxhumane naye I-Antigua neBarbuda High Commission nganoma yimiphi eminye imininingwane nge-visa nezidingo zokungena.